ဒုတိယမြောက်စာအုပ် ထပ်မံထွက်ရှိလာတော့မယ့် ဇဏ်ခီ – 7Day Update News
ဇဏ်ခီကိုတော့ မင်းသားတစ်လက်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေသိရှိထာပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဇာတ်ကား(၃)ကားသာထွက်ရှိထားပေမယ့် ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာနဲ့အတူ အောင်မြင်တဲ့မင်းသားတစ်လက်အဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ပါပြီ။ ဇဏ်ခီကတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့တင်မကပါဘူး တေးရေး၊အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့မင်းသားကတော့ “ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှု” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လည်း ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များကာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း စာအုပ်အသစ်ထွက်ရှိလာဖို့ရှိနေပြီး ပရိသတ်တွေကတော့ စောင့်မျှော်နေကြတာပါ။ ဒုတိယမြောက်စာအုပ်အမည်ကတော့ “စံ ” ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေဆီမကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့်အကြောင်းကို “ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယမြောက်စာအုပ် “စံ” ကို preorder မှာရင် လက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ့် bookmark လေးတွေပါ.. ဒီဇင်ဘာလထဲမှာထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ Preorder တင်လို့ရမယ့်အချိန်ကိုပြန်ပြောပြပါ့မယ်။” ဆိုပြီးဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ရေးသားထားတာပါ။
ပရိသတ်တွေကတော့ ဇဏ်ခီရဲ့ ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှု ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကနေပြီး အတွေးတွေထပ်တူကျပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြရသလို ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ကလည်း ပိုတောင်ကောင်းမွန်နေမလားဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ချင်နေကြပြီထင်ပါရဲ့နော်….
Source : ZennKyi
ဒုတိယမွောကျစာအုပျ ထပျမံထှကျရှိလာတော့မယျ့ ဇဏျခီ
ဇဏျခီကိုတော့ မငျးသားတဈလကျအနနေဲ့ပရိသတျတှသေိရှိထာပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ ဇာတျကား(၃)ကားသာထှကျရှိထားပမေယျ့ ပရိသတျအားပေးမှုမြားစှာနဲ့အတူ အောငျမွငျတဲ့မငျးသားတဈလကျအဖွဈရပျတညျနခေဲ့ပါပွီ။ ဇဏျခီကတော့ သရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့တငျမကပါဘူး တေးရေး၊အဆိုတျောတဈယောကျလညျးဖွဈသလို ဇာတျညှနျးရေးဆရာတဈယောကျလညျး ဖွဈနပေါသေးတယျ။
ဘကျစုံထူးခြှနျတဲ့မငျးသားကတော့ “ကိုယျတိုငျသိရှိသှားမှု” ဆိုတဲ့ စာအုပျလညျး ထှကျရှိထားတာဖွဈပွီး လူကွိုကျမြားကာအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ အခုလညျး စာအုပျအသဈထှကျရှိလာဖို့ရှိနပွေီး ပရိသတျတှကေတော့ စောငျ့မြှျောနကွေတာပါ။ ဒုတိယမွောကျစာအုပျအမညျကတော့ “စံ ” ဖွဈပွီး ပရိသတျတှဆေီမကွာခငျရောကျရှိလာတော့မယျ့အကွောငျးကို “ကြှနျတျော့ရဲ့ဒုတိယမွောကျစာအုပျ “စံ” ကို preorder မှာရငျ လကျဆောငျထညျ့ပေးမယျ့ bookmark လေးတှပေါ.. ဒီဇငျဘာလထဲမှာထှကျဖို့ကွိုးစားနပေါတယျ။ Preorder တငျလို့ရမယျ့အခြိနျကိုပွနျပွောပွပါ့မယျ။” ဆိုပွီးဖဘှေ့တျချမှာ ရေးသားထားတာပါ။
ပရိသတျတှကေတော့ ဇဏျခီရဲ့ ကိုယျတိုငျသိရှိသှားမှု ဆိုတဲ့ စာအုပျကနပွေီး အတှေးတှထေပျတူကပြွီး ကွိုကျနှဈသကျခဲ့ကွရသလို ဒုတိယမွောကျစာအုပျကလညျး ပိုတောငျကောငျးမှနျနမေလားဆိုတာ ဖတျကွညျ့ခငျြနကွေပွီထငျပါရဲ့နျော….
လိမ္မာတဲ့ တူလေးအတွက်စာတစ်စောင်ရေးရင်း ငိုချမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ် ညီညီမောင်
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဦးမိုးဒီ ကိုဗစ်ကူးစက် ခံရ...
မန္တလေးတိုင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရ...
မွငျးခွံမှာ မွို့တှငျးကူးစကျမှု စပွီ (ခရီးသှားရာဇဝငျ...